Home News Maxaa looga hadlayaa kulanka Maanta Xildhibaanada labada gole ay si wada jir...
Maxaa looga hadlayaa kulanka Maanta Xildhibaanada labada gole ay si wada jir ah ugu yeelanayaan Muqdisho?
Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Maanta waxaa kulan wadajir ah ay ku yeelan doonaan Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho.
Ajendaha Kulanka wadajir ah ee Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa waxaa uu yahay Akhrinta 2aad ee Miisaaniayadda dowladda Federaalka ay ku shaqeyn doonto Sanadka Cusub ee 2020-ka.
Xildhibaanada ayaa xalay waxaa loo diray fariimo wargelin ah oo ku aadan in Maanta uu jiro kulan, isla markaana laga doonayo inay soo xaadiran, si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee horyaalla Baarlamaanka.
Xildhibaanada ayaa shalay oo Sabti aheyd meel-mariyay Sharciga Doorashooyinka Qaranka, iyadoo Maalmihii lasoo dhaafay dood adeg ka yeeshay.